Ku xooji Suuqgeyntaada internetka CDNify | Martech Zone
Ku xooji Suuqgeyntaada internetka CDNify
Jimco, Abriil 26, 2013 Mike Cunsolo
Dhamaanteen halkaas ayaan joognay miyaanay ahayn. Ku daalista ololaha suuqgeynta macmiilkaaga, sameynta saacado waali ah iyo howlo badan sida kuwa ugu fiican. Iskudayidaada ugufiican si aad u hubiso in waxwalba ay meesha yaalliin, si ay arrimuhu ugu socdaan si habsami leh intii suurtogal ah markaad noolaato. Xaqiiqdii waan joogay halkaasna waan ka lumay inta saacadood ee aan ku ordayay sida qof waalan. Laakiin farxaddu waa qayb weyn oo ka mid ah sababta aad aniga u sameyso sababtoo ah markaa waad bilaabeysaa waxaadna arki doontaa dhammaan shaqooyinka adag ee bilawga ah.
Dadku waxay ku hawlan yihiin waxyaabahaaga oo ay la wadaagayaan. Ka warqabka astaanta macmiilkaaga ayaa sii kordheysa waxa kaliya ee ay tahay inaad sameysana waa inaad dib u fadhiisato oo aad daawato in dhaqdhaqaaqa warbaahinta bulshada uu isu beddelayo beddelaad degel. Waqti la furo biirka.
Laakiin markaa, sida aad u furayso dhaladaada labaad, waxa ugu xun ee suurtogalka ah ayaa dhacaya! Websaydhkaaga ayaa ku istaagaya joogsiga culeyska taraafikada. Waqtigan xaadirka ah ma jiraan wax badan oo aad sameyn kartid illaa aad horey u haysatid meel lagu kaydiyo (marka laga reebo inay furan tahay biirka labaad).
Maadaama aan ahay Maamulaha Suuqgeynta Dijital ah waxaan kaliya u baahanahay inaan ogaado ololahaygu inuu isu beddelayo beddelaad. Marwalba ma haysto waqti (ama aqoonta farsamada haddii aan runta sheego) si aan uga fikiro bal meesha aan u direyno macaamiisha suurtagalka ah inay la istaagto qulqulka taraafikada.
Waana meesha CDNify ayaa ku caawin kara.
CDNify waa Bilaabasho aan ugu shaqeeyo sidii CMO, oo uu aasaasay James Mulvany. Habka ugu wanaagsan ee lagu qeexo magacyada james waa ikhtiraac. Isagu waa nooca qofka fahmaya sida loo qaato waxyaabaha murugsan una fududeeyo la macaamilkiisa. Taasina waa waxa CDNify sameeyo. Waxay qaadataa shay inta badan ku jahwareersan in la sameeyo oo fududeynaya.
Haddii aad waligaa isku dayday hirgelinta a shabakada bixinta nuxurka (CDN) kahor, waxaad ogaan doontaa inaysan ahayn waxa ugu fudud ee madaxaaga lagu wareejiyo. Habka loo maro warshadaha waa 'hal cabbir oo dhan', taas oo ah dariiqa lagu kalsoonaan karo ee aad iskaga tagi karto jeebkaaga oo aad ku bixin karto adeegyada aadan u baahnayn. Tani waa wax aan isku dayeyno inaan bedelno.
CDNify waa shabakad gaarsiinta waxyaabaha ka dhigaya mid si fudud oo fudud u fududeynaysa helitaanka CDN-ga oo socda. Waa deg deg in labilaabo oo sida ugu fiican oo dhan ah, waxay qaadataa waxyaabahaaga oo waxay si dhakhso leh ugu gudbisaa dhagaystayaashaada - taas oo macnaheedu yahay inaadan ka walwalin waxyaabaha murugsan waxaadna diirada saari kartaa inaad gudbiso olole la yaab leh.
Adoo isticmaalaya CDNify waxaad ku sagootin kartaa ololaha taraafikada ololaha garaaca boggaaga qadka. Sababtoo ah waxaan nahay 'federaal' CDN waxaan ku faafin karnaa macluumaadkaaga shabakadeena daruuriga ah, yareynta waqtiyada xamuulka iyo hubinta in bartaada ay istaagi karto kor u kaca taraafikada. Tani waxay sidoo kale ka dhigeysaa mid la awoodi karo oo macnaheedu yahay inaad kaliya bixinayso xogta aad isticmaasho.
Faa'iidada ugu weyn ee noqoshada a federaal ayaa ah inaan kala boodi karno inta udhaxeysa shabakadaha daruuraha kala duwan, taas oo noo ogolaaneysa inaan si deg deg ah u gaarsiino waxyaabahaaga ku saleysan goobta dhagaystayaashaada. Tani waxay siisaa iyaga dhakhso, waayo-aragnimo raaxo leh iyaga waxayna kaa caawineysaa inaad sare u qaaddo natiijooyinkaaga ololaha adoo u beddelaya eyeballs qasabno.
Waxaan hadda haysanaa 40 POPs adduunka oo dhan waanan kobcinaynaa shabakadan markasta. Waxaan sidoo kale ka shaqeyneynaa waxyaabo isku dhafan si aan uga dhigno dadaalkaaga suuq-geynta mid sahlan iyadoo aan loo eegin barmaamijka aad ku bixinayso ololahaas.
Waad iska qori kartaa laba toddobaad oo tijaabo ah oo bilaash ah hadda oo ku taal www.cdnify.com anaguna waxaan diyaar u nahay inaan kaa caawinno inaad bilowdo.
Mike Cunsolo waa CMO ee CDNify, Shabakad gaarsiinta waxyaabaha taas oo sahlaysa in la helo CDN shaqeynaya.
Suuqgeyntaada Warbaahinta Bulshada waxay u baahan tahay Sawirro